အောင်​မြင်​​နေ​သော အမျိုးသမီး စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းရှင်​တစ်​ဦး၏ ဇာတာ(အောငျမွငျနသေော အမြိုးသမီး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈဦး၏ ဇာတာ) – အခါပေး ဗေဒင်
အောင်​မြင်​​နေ​သော အမျိုးသမီး စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းရှင်​တစ်​ဦး၏ ဇာတာ(အောငျမွငျနသေော အမြိုးသမီး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈဦး၏ ဇာတာ)
akhapaybaydin 12 Jun 2020 Uncategorized
ဆရာကြီးဦးမြင့်​စိန်​၏ ပို့ချချက်​ဖြစ်​တဲ့ “စီးပွား​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​ရင်​ ၁၀-တန့်​ဘာဝသခင်​ဂြိုဟ်​စီးတဲ့ နဝင်းသခင်​ဂြိုဟ်​ရဲ့ပရိယာယ်​အတိုင်းဟော​လေ…” ဆိုတဲ့အတိုင်း-
ဒီဇာတာမှာ ၁၀-တန့်​ဘာဝသခင်​ဂြိုဟ်​သည်​ ၆-ကြာဂြိုဟ်​ဖြစ်​ပြီး ၂-င်္လာနဝင်းကိုစီးထားကာ ၂-င်္လာဂြိုဟ်​ရဲ့ အမြင်​ကိုခံထားရပါတယ်​…။
နဝင်းဇာတာမှာ ၂-င်္လာနဲ့ ၆-ကြာတို့ အိမ်​ချင်းလဲရပ်​ထားတာကလည်း စိတ်​ဝင်​စားစရာ​ကောင်းပါတယ်​…။
၂-င်္လာ​ရော၊ ၆-ကြာဂြိုဟ်​​တွေက အာ​ပေါဂြိုဟ်​လို့​ခေါ်တဲ့ ​ရေဂြိုဟ်​​တွေဖြစ်​ပါတယ်​…။ ဒါ့အပြင်​ သူတို့ဟာ ရသာရုံဂြိုဟ်​​တွေလည်းဖြစ်​ပါတယ်​…။
ဖလဒိပိကာကျမ်းအလိုအရ ၂-င်္လာဂြိုဟ်​ပရိယာယ်​​တွေက- ” ဖြူ​သောအဆင်း၊ ယပ်​​တောင်​ (ပန်​ကာ၊ Air Cooler၊ Air Con.)၊ ထီး၊ သစ်​သီးဝလံ၊ ပန်းမာလ်​၊ ​ကောက်​ပဲသီးနှံ၊ လယ်​ယာလုပ်​ငန်း၊ ပုလဲရတနာ၊ ဖြူ​သောသတ္တု၊ ​ဘော်​၊ ​ငွေ၊ ချို​သောအရသာနှင့်​ ပျားရည်​စ​သော အရာဝတ္ထု၊ နွားနို့၊ အဝတ်​အထည်​၊ ​ရေ၊ ​ကောင်း​သောခဲဘွယ်​​ဘောဇဉ်​” တို့ဖြစ်​ပါတယ်​….။
ဒါ​ကြောင့်​မို့ အထက်​ကလုပ်​ငန်း​တွေကို လုပ်​ကိုင်​ရမည်​ဆိုသည့်​အတိုင်း ဇာတာရှင်​ဟာ ​”​ကောင်း​သောခဲဘွယ်​​ဘောဇဉ်​​” ​တွေကို ​ရောင်းချ​ပြီး ​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ အမျိုးသမီး စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းရှင်​တစ်​​ယောက်​ ဖြစ်​​နေပါတယ်​…။
၂-င်္လာဂြိုဟ်​ကို ​ရေဂြိုဟ်​​ ၆-ကြာကမြင်​တယ်​…။ ဒါ​ပေမယ့်​ ပထဝီရာသီမှာရပ်​ပြီး မြင်​တာဖြစ်​တယ်​…။ ဒါဟာ COCA-COLA တို့လို အရည်​စစ်​စစ်​ Liquid State ကို ညွှန်းတာမဟုတ်​ဘူးဆိုတာကို နားလည်​ရမယ်​…။ စရရာသီမှာရပ်​ပြီး မြင်​တာဖြစ်​လို့ အရည်​​ပေမယ့် ICE လိုမျိုး Solid State ကို ညွှန်းတာမဟုတ်​ဘူးဆိုတာကိုလည်း နားလည်​ရမယ်​…။
KP ပညာမှာလည်း ကျွန်​​တော့်​ရဲ့မူအရ စီးပွား​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​ရင်​ ၂-တန့်​ (ဝင်​​ငွေ)၊ ၁၁-တန့်​ (လာဘ) ဇာတ်​​ဆောင်​ဂြိုဟ်​​တွေရှာပြီး ၄င်းတို့ရဲ့ပရိယာယ်​အတိုင်း ​ဟောပါမယ်​…။
ဒီဇာတာမှာ ၂-တန့်​မှာရပ်​ဂြိုဟ်​မရှိပါဘူး…။ ပိုင်​ရှင်​က ၄-ဟူးပါ…။ ၂-င်္လာတစ်​လုံးတည်းက ၄-ဟူးနက္ခတ်​ကိုစီးထား​တော့ ၂-င်္လာက ၂-တန့် ဘာဝဇာတ်​​ဆောင်​ဖြစ်​ပါတယ်​…။
၁၁-တန့်​ဘာဝမှာ ၂-င်္လာဂြိုဟ်​ရပ်​ပြီး ၆-ကြာတစ်​လုံးတည်းက ၂-င်္လာနက္ခတ်​ကိုစီးထားလို့ ၁၁-တန့်​ဘာဝဇာတ်​​ဆောင်​​တွေက ၂-င်္လာနဲ့ ၆-ကြာတို့ဖြစ်​ပါတယ်​…။
ဒါ​ကြောင့်​မို့ KP ပညာနဲ့ လက်​ရိုးပညာတို့ ကိုက်​ညီမှုရှိပါတယ်​…။
ယခု​လော​လောဆယ်​မှာ​တော့ ဇာတာရှင်​ရဲ့ နက္ခတ်​ ၆-ပါးထဲက “မာနသနက္ခတ်​- Manas” ကို ​ကောဇာ ၈-ဟုစီးထားပါတယ်​….။
ဒါ​ကြောင့်​မို့ 2.9.2019 မှ 20.5.2020 အတွင်း မာနသနက္ခတ်​ကို ပါပဂြိုဟ်​စီးတဲ့ ပရိယာယ်​​တွေဖြစ်​တဲ့ ” မ​တော်​တဆ ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရခြင်း၊ ​နေထိုင်​မ​ကောင်းဖြစ်​ခြင်း၊ စီးပွား​ရေးကံ မ​ကောင်း​သေးခြင်း၊ အလုပ်​အကိုင်​များတွင်​ စိတ်​အ​နှောင့်​အယှက်​များ ကြုံရတတ်​ခြင်း၊ အတွင်းရန်​နှင့်​ အပြင်​ရန်​များကို ကြုံရတတ်​ခြင်း” စ​သော အ​ဟောများကို ကြုံ​တွေ့ရပါမယ်​…။
(မှတ်ချက်။ ။ ဤကာလအတွင်းမှာပဲ အိမ်ထောင်ကွဲခဲ့ပါတယ်။)
ဒါ​ပေမယ့်​ ​ယောဂကာရကဂြိုဟ်​ကြီးဖြစ်​တဲ့ ၃-င်္ဂါဂြိုဟ်​ဒသာစားမယ့်​ (20.2.2025 မှ 20.2.2032) အတွင်းမှာ​တော့ ယခုထက်​ပိုမို၍ ကံ​ကောင်းလိမ့်​မည်​ဖြစ်​ပါ​ကြောင်း…။
(FB ပေါ်တွင် ရေးသားခဲ့သောပို့စ်ဖြစ်ပါသည်။)
Sayar Zar Ni
09- 2500 61346
ဆရာကွီးဦးမွငျ့စိနျ၏ ပို့ခခြကျြဖွဈတဲ့ “စီးပှားရေးနဲ့ပတျသကျရငျ ၁၀-တနျ့ဘာဝသခငျဂွိုဟျစီးတဲ့ နဝငျးသခငျဂွိုဟျရဲ့ပရိယာယျအတိုငျးဟောလေ…” ဆိုတဲ့အတိုငျး-
ဒီဇာတာမှာ ၁၀-တနျ့ဘာဝသခငျဂွိုဟျသညျ ၆-ကွာဂွိုဟျဖွဈပွီး ၂-င်ျလာနဝငျးကိုစီးထားကာ ၂-င်ျလာဂွိုဟျရဲ့ အမွငျကိုခံထားရပါတယျ…။
နဝငျးဇာတာမှာ ၂-င်ျလာနဲ့ ၆-ကွာတို့ အိမျခငျြးလဲရပျထားတာကလညျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ…။
၂-င်ျလာရော၊ ၆-ကွာဂွိုဟျတှကေ အာပေါဂွိုဟျလို့ချေါတဲ့ ရဂွေိုဟျတှဖွေဈပါတယျ…။ ဒါ့အပွငျ သူတို့ဟာ ရသာရုံဂွိုဟျတှလေညျးဖွဈပါတယျ…။
ဖလဒိပိကာကမျြးအလိုအရ ၂-င်ျလာဂွိုဟျပရိယာယျတှကေ- ” ဖွူသောအဆငျး၊ ယပျတောငျ (ပနျကာ၊ Air Cooler၊ Air Con.)၊ ထီး၊ သဈသီးဝလံ၊ ပနျးမာလျ၊ ကောကျပဲသီးနှံ၊ လယျယာလုပျငနျး၊ ပုလဲရတနာ၊ ဖွူသောသတ်တု၊ ဘျော၊ ငှေ၊ ခြိုသောအရသာနှငျ့ ပြားရညျစသော အရာဝတ်ထု၊ နှားနို့၊ အဝတျအထညျ၊ ရေ၊ ကောငျးသောခဲဘှယျဘောဇဉျ” တို့ဖွဈပါတယျ….။
ဒါကွောငျ့မို့ အထကျကလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျရမညျဆိုသညျ့အတိုငျး ဇာတာရှငျဟာ “ကောငျးသောခဲဘှယျဘောဇဉျ” တှကေို ရောငျးခပြွီး အောငျမွငျနတေဲ့ အမြိုးသမီး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျ ဖွဈနပေါတယျ…။
၂-င်ျလာဂွိုဟျကို ရဂွေိုဟျ ၆-ကွာကမွငျတယျ…။ ဒါပမေယျ့ ပထဝီရာသီမှာရပျပွီး မွငျတာဖွဈတယျ…။ ဒါဟာ COCA-COLA တို့လို အရညျစဈစဈ Liquid State ကို ညှနျးတာမဟုတျဘူးဆိုတာကို နားလညျရမယျ…။ စရရာသီမှာရပျပွီး မွငျတာဖွဈလို့ အရညျပမေယျ့ ICE လိုမြိုး Solid State ကို ညှနျးတာမဟုတျဘူးဆိုတာကိုလညျး နားလညျရမယျ…။
KP ပညာမှာလညျး ကြှနျတေျာ့ရဲ့မူအရ စီးပှားရေးနဲ့ပတျသကျရငျ ၂-တနျ့ (ဝငျငှေ)၊ ၁၁-တနျ့ (လာဘ) ဇာတျဆောငျဂွိုဟျတှရှောပွီး ၎င်းငျးတို့ရဲ့ပရိယာယျအတိုငျး ဟောပါမယျ…။
ဒီဇာတာမှာ ၂-တနျ့မှာရပျဂွိုဟျမရှိပါဘူး…။ ပိုငျရှငျက ၄-ဟူးပါ…။ ၂-င်ျလာတဈလုံးတညျးက ၄-ဟူးနက်ခတျကိုစီးထားတော့ ၂-င်ျလာက ၂-တနျ့ ဘာဝဇာတျဆောငျဖွဈပါတယျ…။
၁၁-တနျ့ဘာဝမှာ ၂-င်ျလာဂွိုဟျရပျပွီး ၆-ကွာတဈလုံးတညျးက ၂-င်ျလာနက်ခတျကိုစီးထားလို့
၁၁-တနျ့ဘာဝဇာတျဆောငျတှကေ ၂-င်ျလာနဲ့ ၆-ကွာတို့ဖွဈပါတယျ…။
ဒါကွောငျ့မို့ KP ပညာနဲ့ လကျရိုးပညာတို့ ကိုကျညီမှုရှိပါတယျ…။
ယခုလောလောဆယျမှာတော့ ဇာတာရှငျရဲ့ နက်ခတျ ၆-ပါးထဲက “မာနသနက်ခတျ- Manas” ကို ကောဇာ ၈-ဟုစီးထားပါတယျ….။
ဒါကွောငျ့မို့ 2.9.2019 မှ 20.5.2020 အတှငျး မာနသနက်ခတျကို ပါပဂွိုဟျစီးတဲ့ ပရိယာယျတှဖွေဈတဲ့ ” မတျောတဆ ထိခိုကျဒဏျရာရခွငျး၊ နထေိုငျမကောငျးဖွဈခွငျး၊ စီးပှားရေးကံ မကောငျးသေးခွငျး၊ အလုပျအကိုငျမြားတှငျ စိတျအနှောငျ့အယှကျမြား ကွုံရတတျခွငျး၊ အတှငျးရနျနှငျ့ အပွငျရနျမြားကို ကွုံရတတျခွငျး” စသော အဟောမြားကို ကွုံတှရေ့ပါမယျ…။
(မှတျခကျြ။ ။ ဤကာလအတှငျးမှာပဲ အိမျထောငျကှဲခဲ့ပါတယျ။)
ဒါပမေယျ့ ယောဂကာရကဂွိုဟျကွီးဖွဈတဲ့ ၃-င်ျဂါဂွိုဟျဒသာစားမယျ့ (20.2.2025 မှ 20.2.2032) အတှငျးမှာတော့ ယခုထကျပိုမို၍ ကံကောငျးလိမျ့မညျဖွဈပါကွောငျး…။
(FB ပျေါတှငျ ရေးသားခဲ့သောပို့ဈဖွဈပါသညျ။)
Next ” အုတ်​မြစ်​ချမင်္ဂလာ” အခါဇာတာ( ” အုတျမွဈခမြင်ျဂလာ” အခါဇာတာ)